Akita: Nnukwu Nkịta Ebube si Japan - Reeddịrị
Akita bụ nnukwu nkịta nke si Japan. Nkịta ndị a nwere muscular ma nwee ike ịkọ akụkọ ihe mere eme ha na Japan oge ochie. A na-asọpụrụ ha dị ka ihe nnọchianya nke ezi ahụike na obi ụtọ.
Ndị a bụ nkịta na-eche nche, site na-site-na. Ọ bụ ezie na a na-ejikarị ha eme ihe dịka ndị enyi taa, nkịta ndị a na-eche nche ka na-achịkwa ọtụtụ ebumnuche ha n'oge a. Nke a nwere ike ime ka ha bụrụ ihe dị mgbagwoju anya.
Ebee ka ndị Akita si malite?
Kedu ihe Akita dị?
Olee nnukwu Akitas nwere?
Kedu agba ndị Akitas nwere ike ịbata?
Onye na-eguzosi ike n'ihe na onye a kwanyere ùgwù
Nlekọta nke Akitas
Okwu Nkita Nkita Akita
Ego ole bụ nkịta Akita?
Onye kwesiri inweta nkita Akita?
Akita bụ nkịta ndị Japan oge ochie. O sitere na Japan oge ochie ma bụrụ nkịta a na-akpọ Spitz. Likelydị ahụ nwere ike gbasaa ọzọ na akụkọ ntolite.
Agbanyeghị, ụdị a ka anyị siri mara taa bred bidoro na mbido narị afọ nke iri na asaa na mgbago ugwu Japan. E nwere ọtụtụ akụkọ ifo gbasara etu nkịta a siri wee dịrị.
Otu n'ime akụkọ ifo ndị dị otú ahụ na-agụnye ọkwá a dọọrọ n'agha nke hụkwara nkịta n'anya. E zigara ya ibi ụbọchị ndụ ya niile n’agwaetiti.
Ọ gbara ndị ọzọ nọ na Akita ume ka ha mụọ nkịta ịchụ nta maka ọtụtụ egwuregwu. N'ikpeazụ, nke a mepụtara Akita, amaara ịchụ nta ọhịa, mgbada, na anụ ọhịa bea.
Ruo ogologo oge, inwe ezinụlọ Akita bụ naanị maka ezinụlọ ndị eze. Agbanyeghị, n'oge na-adịbeghị anya, ndị mmadụ na-adị kwa ụbọchị ewere ha dịka nkịta na ịchụ nta.
N'oge dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme, nkịta a etisasịwo na njedebe mkpochapụ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ naanị ndị ama ama ka ọ gbochiri. Iji gbochie ụdị a ịnwụ anwụ, e guzobere ụlọ ọgbakọ mba Japan na 1927.
Helen Keller mechara weta Akita mbụ na United States. E buuru ya gaa hụ ihe oyiyi nke Hachiko n’oge njem ya na Japan.
A maara Akita a ma ama maka ichere ọtụtụ afọ maka onye nwe ya n'ọdụ ụgbọ oloko. Mgbe ọ gara ileta ihe akpụrụ akpụ ahụ, gọọmentị Japan nyere ya Akitas abụọ.
Mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị, ọtụtụ ndị agha kpọghachiri Akitas na steeti. Ka osi di, Akita abanyeghi akwukwo AKC Stud rue 1972.
Akita bu a buru ibu na nkịta dị ike. O nwere aru aru, buru nnukwute aru ma burukwa nkita-a di nkita.
Isi ha buru ibu ma buru oke ibu, na-eme ka ha buru ibu. Nnukwu nkịta a nwekwara ọdụ buru ibu, gbara gburugburu.
Nri ndị na-ere ere na-eme ka isi ha dịkwuo ukwuu karịa ka ọ dị! Anya ha na-enwu gbaa bụ otu n’ime njirimara nke ụdị a. Anya ha dị nkọ ma na-ekwupụta ihe.
Gịnị ka ọ pụtara mgbe ọdụ Akita dara?
Otu ọdụ Akita wee daa ala maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche. Ọ bụrụ na nkịta na-enwe mmechuihu, ụra ma ọ bụ ihe mgbu, ọdụ ahụ nwere ike ịda ada n'ihi ya.
Nke a na - eme mgbe ụmụ nkịta nọ na-amị ebe ọ bụ na mgbu dị n'ọnụ ha nwere ike ime ka ọdụ ha daa na o doro anya na ọ nweghị ihe kpatara ya.
Ha ọdụ nwekwara ike ida mgbe ha dị izu ike ma ọ bụ na ọ bụghị na-arụsi ọrụ ike n'oge ahụ. Nke a na-adịkarị n'etiti nkịta niile nwere ọdụ ha welitere.
Dị nnọọ ka nkịta nwere ọdụ kwụ ọtọ agaghị enwe ọdụ ha mgbe niile ka ọ kwụ ọtọ, nkịta nwere ọdụ gbagọrọ agbagọ agaghị enwe ọdụ ha mgbe niile.
Agbanyeghị, Akitas nwekwara ike nweta ihe akpọrọ a ọdụ oyi kpọnwụrụ . Nke a na-eme mgbe ha “n’akpatibe” isi ha.
Ọtụtụ mgbe, mgbe nke a mere, nkịta agaghị ebuli ya otu izu ma ọ bụ abụọ n'ihi na ọ na-ewute ya. Ọtụtụ oge, nkịta ga-akawanye mma n'onwe ya. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji ọgwụgwọ na-agwọ ya.
E nwere ụzọ Akitas abụọ dị mkpa - Japanese Akitas na Akitas America . Isi ihe dị iche n’etiti ụdị abụọ a bụ nha. Akitas America dị ntakịrị karịa Akitas ndị Japan.
Ndị Japan Akitas nwekwara obere ntị. Akitas America nwere nnukwu ntị.
Ọtụtụ mgbe, Akitas nwere ike iguzo site na 24 ruo 28 sentimita asatọ, ihe dị ka 61 cm na 71 cm. Ha nwekwara ike itu ebe ọ bụla site na 70 ruo 130 pound ma ọ bụ ihe dịka 31.7 n'arọ ruo 59 n'arọ.
Lesmụ nwoke na-ebukarị ibu karịa ụmụ nwanyị. Aren’t gaghị achọta nwanyị karịrị 100 pound ma ọ bụ kilogram 45. Agbanyeghị, ụmụ nwoke nwere ike buru ibu dịka kilogram 130 ma ọ bụ kilogram 59.
Akitas nwere ike ịbịa n'ụdị agba ole na ole, gụnyere ọcha. Red fawn bụ otu n'ime uwe mkpuchi kachasị ewu ewu.
Nokwarem no, sesame, black, chocolate, ne brindle betumi ayɛ yiye. Akara ọcha na-adịkarị.
Ihe akara ndi ozo bu ihe ndi ozo. Ihe nkpuchi ọcha, pinto, na ojii nwere ike.
Akita nwere akwa mkpuchi abụọ, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eguzogide ihu igwe (ma na-acha ọkụ).
Akitas na-eri otutu ihe ịchụ nta nkịta. Ọtụtụ n'ime amamihe ebumpụta ụwa ha na omume ha oge ochie ka na-egosipụta taa.
Ndi Akitas bu nkita ezi na ulo?
Ọ bụghị karịsịa. Ha bụ ndị ezinụlọ kwesịrị ntụkwasị obi ma nwee ịhụnanya. Ọ na-amasị ha ịnọnyere ezinụlọ ha ma na-echekwa ntakịrị.
Otú ọ dị, ha anaghị enwe mmasị karịsịa n'ebe ndị bịara abịa nọ. Nnukwu ibu ha nwere ike ime ka o siere ha ike ijikwa.
Ha na ndị ezinụlọ ha ga-arapara, ma ha abụghị kemgwucha Ugboro. Ha abụghị lapdogs.
Akitas nwere ike ịdị mma na ụmụaka, mana ha kacha mma na ụmụaka toro eto. Ha anaghị enwekarị ndidi na ụmụaka.
Ndi Akitas na ndi nkita ozo nwere ike ibi?
Mba. Ha bụ ndị a maara nke ọma maka ịbụ keesemokwu n'ebe nkịta ndị ọzọ nọ, ọkachasị ndị nke otu nwoke. Mmekọrịta oge niile adịghị ka ọ ga - enyere nke a aka. Nkịta a bụ n'ezie n'ime ezinụlọ otu anụ ụlọ.
Ndi Akitas nwere nchegbu nkewa?
Akitas anaghị enwekarị nchekasị nkewa. Otú ọ dị, ụdị ọ bụla nwere ike ịnweta nchegbu nkewa, ya mere ọ ga-ekwe omume.
Nkewa nkewa nwere ike ibute nsogbu omume dị iche iche. N'ihi na nkịta ndị a buru ibu, ha nwere ike imebi ọtụtụ ihe.
Agbanyeghị, nkịta ndị a na-abụkarị emela nwee nchekasị.
Gini mere Akitas ji di oke ike?
Akitas abụghị akụkọ ihe mere eme ka ọ dịrị na nkịta ndị ọzọ. Ha anaghị etinye aka na ya ma bụrụ mpaghara.
Nke a bụ isi ihe kpatara ha ji eme ihe ike. Ha na-eme nke kachasị mma n'ezinụlọ otu nkịta ma ọ bụ ọbụna ezinụlọ nke enweghị anụ ụlọ ndị ọzọ.
N'agbanyeghị ụfọdụ asịrị, ụmụ nwanyị Akitas na-emekwa ihe ike.
Ndị nwoke na nwanyị nwere ike ịme nche nke ọma n'ihi àgwà a.
Ndi Akitas na-eme nkpu nke ukwuu?
Ha anaghị eme mkpọtụ, ma ha na-eme ogbugbo. Dị ka nkịta na-achị, ha ga-eti mkpu na ndị ọbịa, ndị mmadụ na-eje ije n'èzí, na nkịta ndị ọbịa. Ha nwere ike ịme ezigbo ndị nche ma lelee nkịta anya n'ihi nke a.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta nkịtị, nke a abụghị ya.
Nwere ike ịzụ onye Akita?
Dị ka nkịta niile, Akitas dị zụrụ . Ha dị nkọ ma na-eguzosi ike n'ihe, nke na-arụ ọrụ na ọdịmma anyị mgbe anyị na-anwa ịzụ ha.
Agbanyeghị, ha nwekwara ike ịbụ ndị isi ike na nnwere onwe. Nke a na - adịkarịkarị na ọkwa “ntorobịa” ha.
Oge izizi na ọzụzụ oge niile dị mkpa. Ma ọ bụghị ya, nkịta ndị a nwere ike bụrụ ihe na-enweghị nchịkwa. Ekwesiri ka ha buru ndi mmadu dika nkịta.
Nwa nkita dị mkpa maka canines ndị a. Ọ dị ha mkpa ịmụta ịnakwere ọtụtụ ndị bịara abịa. Ndabere ha bụ na ndị bịara abịa niile na-eyi egwu; mmekorita nke mbu kwesiri idozi echiche a.
Nkịta ndị a bụ ukwu dị ọcha. Nke a na-eme ka ha di oke mfe ịkpụ ụgbọ oloko. N'ezie, ụfọdụ nkịta na-achọkarị ịzụ onwe ha na obere mgbalị anyị!
Akitas esighi ike ilekọta anya. N'ezie, nlekọta nlekọta ha pere mpe. Ha anaghị echekarị ihu igwe na ihu igwe, na-eme ka ha bụrụ ezigbo nhọrọ maka ọtụtụ mpaghara.
Kedu otu mgbatị ahụ Akita chọrọ?
Otu Akita chọrọ obere mmega ahụ n'ihi ogo ike ha dị elu. Ha abughi ndi na-aru oru.
Otú ọ dị, ha chọrọ mmega ahụ kwesịrị ekwesị kwa ụbọchị. Ije ije brisk bụ ezigbo nhọrọ, n'agbanyeghị na ụdị ndị Japan a nwere ike ịchọ ntakịrị karịa nke a.
Na mmega ahụ kwa ụbọchị, nkịta ndị a nwere ike ịme nke ọma na obere ụlọ. Ha na-anọkarị n'ime ma na-akpa ezi àgwà. Ọ bụ mgbe ha mere obere mgbatị ka ha nwere ike ibibi ihe.
Ọbụna obere oge igwu egwu n'èzí n'azụ ụlọ nwere ike ịbụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka canines ndị a.
Akita Dị Ọcha
A maara nkịta ndị a maka ihicha onwe ha dị ka nwamba. Ha dị ezigbo ọcha, ha anaghị achọ ka ị na-edozi ihe dị ukwuu site na nke a.
Ha nwere ntakịrị ekpomeekpo nkịta na anaghị achọ ịsa ahụ mgbe niile. Uwe ha miri emi chọrọ nchacha kwa ụbọchị.
Itadị Akita na-atụfu oge oge. N'oge ndị a, ọ ga-adị ha mkpa ịsachasị ha. Mgbe ha na-anaghị awụfu, ị nwere ike pụọ na ịsachasị ha naanị otu ugboro n'izu.
N'ezie ọ dabere na mmadụ na oge nke afọ. Ikwesiri ilebanye anya na ọkwa ịwụfu ha iji chọpụta mgbe ị ga-ehicha ha.
Uwe ha nwere ebe ọtụtụ ntutu ha wụsịrị na-esite, yabụ na ị ga-eji ahịhịa kwesịrị ekwesị iji banye n'ime uwe ha. Uwe elu ha nwekwara ike ịwụfu, mana ọ naghị adịkarị njọ.
Dị ka nkịta niile, ị ga-ehichapụ ezé ha ma belata mbọ ha mgbe niile. Nke a dị oke mkpa maka ahụike ha. Nnukwu osisi ndị toro eto na-afụ ụfụ, ezé ndị na-arịa ha nwekwara ike ịkpata nsogbu ndị nwere ike igbu mmadụ.
Ego ole ka Akita na-eri?
Akitas nwere ike iri nri otutu. Ha bụ buru ibu nkịta, ya mere chọrọ a otutu mmezi nri na-eme nke ọma. Onye toro eto Akita na-eri ihe dị ka iko 5-6 kwa ụbọchị.
Agbanyeghị, nri dị iche iche nwere caloric dị iche iche. Dị ka ị nwere ike iche, nke a nwere ike imetụta ego ịchọrọ iji zụọ canine gị. Lelee azụ nke nkịta nri gị ma ọ bụ nwee ike maka ntuziaka ụfọdụ.
Nkịta ndị a chọrọ nri protin dị elu n’ihi ahụ ike ha. Ha choro otutu protein ka egwuregwu ha nwee ike idi ike.
Ọtụtụ nri nkịta na-adịkarị elu nwere ọtụtụ anụ, nke pụtara na ha na-abụkarị nnukwu protein. Nke a ga - efu ntakịrị, mana ọ dị mkpa maka ọdịmma ha niile.
Dị ka ọtụtụ ụdị, nkịta ndị a na-enwekarị nsogbu ahụike ole na ole. Nke mbu, ha nwere ike inwe nsogbu anya, dika retinal retine na-aga n'ihu ma ọ bụ PRA.
Ọrịa a bụ isi gụnyere imefusị mkpụrụ ndụ retinal nkịta gị, nke na - enyere gị aka ịhụ anụ. Ọ bụrụ na ha arụghị ọrụ ọfụma, nkịta ahụ ga-emecha kpuo ìsì. Nke a bụ ọnọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Nsogbu ntị dịkwa ike, ọ bụ ezie na ha anaghị adị ka ụfọdụ ahịhịa ndị ọzọ. Ọ bụrụhaala na ị na-ele anya na ntị nkịta gị ma hichaa ha mgbe ha ruru unyi, a ga-ebelata ohere nke ịrịa ọrịa ntị.
N'ihi na nkịta ndị a buru ibu, nsogbu nkwonkwo na-ahụkarị. Nke a bụ eziokwu maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkịta niile, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ọtụtụ ihe ị ga-eme mkpụrụ ndụ ihe nketa . Hip dysplasia bụ ihe nkịtị.
Luckily, e nwere ihe ole na ole i nwere ike ime iji zere ndị a nsogbu nkwonkwo . Nke mbu, mmega ahụ siri ike mgbe nkịta na-etolite nwere ike ibute nsogbu nkwonkwo ma emesịa.
Nkịta ndị na-emechabeghị eto eto ekwesịghị ịdị na-emega ahụ nke ọma, ha ekwesịghịkwa amanye na-emega ahụ. Ọ bụrụ na nwa nkita ahụ dinara ala ma laa ezumike n’oge ị na-aga ije, ị ga-ahapụ ha ka ha zuo ike.
I kwesịkwara ịgba mbọ hụ na ị na-eri nri nwa nkita kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị nri nkịta niile kwesịrị ekwesị maka nkịta ndị a.
Chọrọ nri akwadoro maka ụmụ nkịta buru ibu. Ndị a nwere nri nwa nkịta na-eto eto kwesịrị ịkwado nkwonkwo ya.
Akita dịkwa ntakịrị mfe elu mmiri . Ọ dịghị onye maara kpọmkwem ihe na-akpata ọrịa a.
Agbanyeghị, ọ na-eyi ndụ egwu ma yie ka ọ kachasị ewu ewu na ụdị nkịta ụfọdụ maka amaghị ihe kpatara ya. Ihe o bu n’iile bu imebi na juputara na mmanu.
N'ikpeazụ, afọ ga-agbanye veins, na-ebipụ mgbasa na akụkụ ụfọdụ na akwara. Nke a nwere ike ịnwụ ngwa ngwa ma chọọ ịwa ahụ mberede.
Hypothyroidism na-agwọ ọrịa dịkwa ka ọ na-adịkarị. Ihe na - adịghị mma na gland thyroid na - egosi nsogbu a. Nke a na - eduga na mbelata nke ikike nke nkịta, nke nwere ike ọgbaghara na ụdị ihe niile.
Ihe mgbaàmà nke nsogbu a gụnyere ibu ibu, ike ọgwụgwụ, ekweghị ibe nọrọ, ntutu isi na-adịghị mma, obere mkpa, na ịdebe akpụkpọ ahụ ka ukwuu.
Ọrịa a bụ ọ bụghị ọgwụgwọ, ma ọ na-edozi ya na ọgwụ. Nkịta gị ga-achọ iji ọgwụ na-agbanwe ọgwụ gị.
Kedu ihe nyocha ahụike nke Akita kwesịrị inwe?
Tupu a zụọ ha, ndị nne na nna nwere ike ịnabata ụdị ahụike dị iche iche. Nke a bụ iji hụ na ha ebunyeghị ụmụ ha nsogbu ọ bụla.
Ekwesịrị ịlele anya ha, na nkwonkwo ha kwesiri ka x-rayed hụ na ha anaghị enwe olile anya dysplasia.
Kwesịrị ị jụọ maka nyocha ahụike ndị a tupu ịzụta nwa nkịta ọ bụla. Ọzọkwa, jụọ maka ahụike nke nne na nna.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, jụọ ka ị hụ ndị nne na nna na mpaghara a na-edobe ụmụ nkịta ahụ opekata mpe.
Ogologo oge ole ka Akitas dị?
Maka otu ha si buru ibu, Akitas nwere ezigbo ndụ. Ọtụtụ mgbe, nkezi Akita na-adị n'etiti afọ 10-15. Genetics, gburugburu ebe obibi, na ahụike na-ekere òkè na ebe Akita gị ga-ada na nke a.
Ọ bụrụ na nkịta nwere nsogbu ahụike dị iche iche, ọ nwere ike ịdị ndụ karịa obere nkịta na-agba ọsọ.
Ibu nwere ike ime ka ọtụtụ nsogbu Akita ka njọ. Dịka ọmụmaatụ, ibu ibu nwere ike itinye nrụgide na nkwonkwo, nke nwere ike ịkpata nsogbu nkwonkwo.
N'ihi nke a, ị kwesịrị ị na-edozi nkịta nkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya na ha ga-adị mma ma sie ike n'oge ndụ ha niile.
Dabere na Drake Center maka Veterinary Care, ọrịa kansa bụkwa a nkịtị kpatara nke ọnwụ na nkịta ndị a.
Akitas na-akwụkarị $ $ Ogbe 800 . Otu onye na - azụ ihe ị nwetara nkịta site na ihe, dịkwa ka eriri ọbara. Nkịta ndị a na-azụ maka ihe ngosi ga-adị oke ọnụ karịa ndị na-eri dị ka ndị ibe.
Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ nwere aha ọma ga-akwụ ụgwọ maka nkịta e weere dị ka 'ndị na-eme ụdị' ma dabara nke ọma n'ụkpụrụ ahụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na nkịta ahụ na-agbaso usoro ndu ahụ nke ọma ma gafee ule nyocha ahụike, enwere ike ịhụ nkịta ahụ ka ọ baa uru karịa n'ihi na ha nwere ike mepụta ụmụ nkịta dị mma.
Ọ bụrụ na ị naghị ezube ịzụlite Akita gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịchekwaa ego gị site na idozi ha tupu ị kpọga ha n'ụlọ.
Ọnụahịa ndụ nke Akita nwere ike ịdị elu. Dịka ọmụmaatụ, nkịta a na-arụ ọrụ buru oke ibu, yabụ na ihe ọ bụla ịzụrụ ga-abụ nnukwu.
Ha ga-achọ nnukwu akpati na akwa, ọkpụkpụ siri ike, na ọgwụ ọgwụ buru ibu mgbe ọ dị mkpa.
Ha na-eri karia ma choo nri di oke nma. N'ihi nke a, ị kwesịrị ịtụ anya ịkwụ ụgwọ obere nri kwa afọ.
Kedu ihe kpatara amachibidoro Akita n'obodo ụfọdụ?
Citiesfọdụ obodo na-ele nkịta ndị a anya dị ka ihe dị egwu ma ghara ịhapụ ha n'ime obodo ha n'ihi nke a. Fọdụ na-ekwe ka ndị ọzọ, dị ka ma ọ bụrụ na gị canine gafere ule ụfọdụ. Kwesịrị ịlele gị ugbu a obodo ụkpụrụ nduzi.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị na-azụ anụ na-elekwasị anya na Akita. Na Akita Club nke America bụ klọb # 1 na United States. Ha na-akpakọrịta na American kennel Club ma nwee ọtụtụ ozi gbasara Akita na weebụsaịtị ha.
I nwekwara ike ịchọta ndepụta nke klọb mpaghara ma jiri Akita ha nwa nkita ịchọta ụmụ nkịta dị ugbu a.
Na Japanese Akita Club nke America na-elekwasị anya na Japanese Akitas. Ha nwekwara a ndepụta nke breeders n'ihi na ị gafere site na ndị otu nzukọ. Nke a bụ ụzọ dị mfe iji hụ na ị na-enweta nwa nkịta dị mma.
United States bụ ebe obibi maka ụdị nnapụta dị iche iche nke Akita. Ọtụtụ n'ime ndị a bụ mpaghara, agbanyeghị.
Betzọ kachasị mma gị bụ ịchọta nke na-ekpuchi mpaghara gị, dịka nkịta ha napụtara ga-adị na mpaghara gị. Nke a pụtara na ị ga - eme obere njem iji nabata ha.
Resfọdụ nnapụta nwere ike ikwe ka eburu nkịta ha gaa na mpaghara ndị ọzọ. Agbanyeghị, nke a na-apụtakarị na ị ga-akwụ ụgwọ ụgbọ njem ma ọ bụ ụgbọala iji bulie nkịta ahụ n'onwe gị.
Fọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị ewu ewu gụnyere:
Nnapụta Big East Akita
Midwest Nnapụta Nnapụta Society
Nnapụta Rakki-Inu Akita .
Japanese Shiba Inu n'oké ọhịa
Akita na Shiba Inu bụ nkịta mara mma. Ha abụọ si Japan ma bụrụ nkịta yiri spitz, nke mere ka ha yie ya. Agbanyeghị, ha dị iche na ọtụtụ ụzọ dị iche iche.
Ihe kachasị dị iche bụ na Shiba Inu dị obere karịa Akita. Shiba Inus na-eguzo naanị n'ihe dịka 13 ruo 17 n'ubu, ebe Akitas guzo karịa 24 sentimita asatọ. Nke a bụ isi ihe dị iche na etiti abụọ ndị a.
Shiba Inus nwekwara olile anya ndụ dị elu karịa Akita. Ha nwere ike ịdị ndụ ruo afọ iri na isii n’ọtụtụ oge.
Onwere otutu nkpuru Akita na agba gburugburu ugbu a. Na teknụzụ, enwere nkịta ọ bụla na nkịta ọ bụla.
Otú ọ dị, ụfọdụ ụdị ụdị dị iche iche dịkarịsịrị karịa ndị ọzọ. Huskita, Akita Shepherd, na Akita Chow bụ ndị kachasịkarị ebe ahụ.
Fọdụ n'ime ụdị ndị a gwakọtara aghọọ ụdị “nkịta na-emepụta”. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-azụ ụdị anụmanụ ndị a dị iche iche na nzube iji mezuo ụfọdụ njirisi.
Nke a abughi ihe ohuru ebe obu na nkita nile di ọcha otu ugboro agwakọta udiri. Agbanyeghị, ọ nwere ike bụrụ obere esemokwu.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-esiri ike ịchọta onye na-azụ atụrụ nke ọkachamara na nkịta ndị a. N'ihi nke a, ọ na-esiri ha ike karịa ịchọta Akita dị ọcha.
Akitas kachasị mma maka ezinụlọ ndị nwere anụ nwere ụmụaka toro eto. Nkịta ndị a dị ezigbo ike ma chọọ mmega ahụ kwa ụbọchị. N'ihi nke a, ha kachasị mma maka ndị na-adịghị arụ ọrụ ọ bụla.
Kwesịrị igwu egwu na nkịta gị n'èzí ma ọ bụ were ha gagharị kwa ụbọchị ọ dịkarịa ala minit 30. Nwa nkịta ga-achọ mmega ahụ karịa.
Nkịta ndị a nwekwara ike isi ike ịzụ. Ha kachasị mma maka ndị nwe nkịta nwere ahụmahụ bụ ndị nwere ike itinye aka na klaasị ọzụzụ nkịta na mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze. Ha abụghị nkịta dị mfe.
Otú ọ dị, nkịta ndị a nwere ike ịdị mma n'anya nke ọma ma otu n'ime ndị enyi kachasị eguzosi ike n'ihe ị ga-ahụ. Ha na-ahụ ndị ezinụlọ ha n'anya nke ukwuu ma bụrụkwa ezigbo nkịta na-eche nche ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Akita nwere ike ịbụ ezigbo nkịta ezinụlọ n'ọnọdụ ụfọdụ. Agbanyeghị, ha chọrọ nlekọta na njikwa pụrụ iche.
Ndị German Shepherd Golden Retriever Mix dị mma maka gị?
Ezigbo Nkịta Ezinaụlọ 22 kacha mma maka ụmụaka na nne na nna na-ejisi ike
ego ole nkịta m ga -atụ mgbe ihe mgbako tozuru etozu
shih tzu mix na yorkie
ụdị ọbara dị iche iche nke pitbull
black labrador retriever German onye ọzụzụ atụrụ mix
ezigbo nkịta aha maka pitbulls